A ga-ewepụta OPPO Reno na Europe na Eprel 24 | Gam akporosis
Egosi ụbọchị ngosi nke OPPO Reno na Europe
Ọhụrụ nso nke OPPO Reno bụ otu n'ime ihe ndị kasị atụ anya na-atụ anya izu ole na ole sochirinụ. Ruo ugbu a, anyị nwere ngụkọta nke usoro ise n'ime ya, edebanyela aha na Europe. Na mgbakwunye, n'ime izu ndị a anyị amatala ụfọdụ nkọwa banyere ekwentị ndị a, nke kwesịrị ịbịarute n'ọnwa a. Ugbu a, ụbọchị ngosi ha ga-enwe na Europe ekpughere. Otu mpempe ozi nke ejiri ịnụ ọkụ n'obi chere.
E kwuru na Ọ ga-abụ na Eprel mgbe a ga-eweta ụdị OPPO Reno a. O yiri ka a ga-enwe ihe abụọ na nke a. Otu na China na otu na Europe mgbe ọnwa a gasịrị. Emere ihe abụọ ahụ.
N'ihe banyere ihe omume na China, anyị agaghị echere ogologo oge ka a ga-enwe ya. Ebe ọ bụ Eprel 10, ụbọchị a họọrọ maka otu. Ya mere, na ụbọchị ole na ole anyị maara nke a nso nke OPPO Reno eze ugbu a. Ọ bụ ezie na, dị ka anyị kwurula, e nwere ihe omume ọzọ na Europe.
N'okwu a, akara ahịa ndị China na obodo Zurich nke Switzerland maka ngosi a. Ihe omume a ga-eme n'April 24. Ya mere, izu abụọ mgbe e gosipụtara ọkwa a na China, a na-eme ihe omume ọzọ a. Site na ya ka a na-ewebata nso na Europe.
Izu ndị a anyị na-enwe ọtụtụ data gbasara OPPO Reno ndị a. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ezinụlọ zuru oke zuru oke, nke ejiri akara ya na-achọ imeziwanye ọnụnọ ya na ahịa Europe, nke dị ugbu a abụghị otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu. N'ihi ya, ọ bụ isi tọhapụ.
Anyị ga-ege ntị na ihe omume na China n'izu a. Ebe obu na anyi amaghi ma OPPO Reno a ka aga eweputa ihe zuru oke ma obughi. Onweghị ihe ekwuru na nke a rue ugbu a. Ma ọ ga-adọrọ mmasị ịmata ma ọ ga-abụ otu ma ọ bụ na ọ gaghị adị. N'ọnọdụ ọ bụla, na njedebe nke Eprel anyị nwere oge ịhọpụta na Zurich.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Egosi ụbọchị ngosi nke OPPO Reno na Europe
Chedo ngwa gị na mkpisiaka jiri ngwa ndị a
Xiaomi Mi 9 dị iche iche bụ onye kacha ere ahịa